UMthetho: imvume ingabonakali ngokuphuza utshwala | Isisekelo Somvuzo
Ikhaya The Law Iyini imvume ekusebenzeni?
Kwenzekani njengoba ubusuku buqhubekela phambili kanti noma bobabili abantu abasha sebebuhlungu kakhulu ekuphuzeni? Uma izivimbela ziphansi futhi zifuna ukubopha kancane, umuntu angahamba kangakanani? Ngabe 'cha' kusho ukuthi 'mhlawumbe'? Yimiphi imithetho yomdlalo? Uthando luphendukela nini ocansini? Ubani onquma?
Izimvume kanye Notshwala
Ngixoxisane nowesifazane oneminyaka engu-17 onesimo sengqondo esingesihle esivela emndenini ocebile obebambe iqhaza emakilasini okuvuma nobufazi. Sizombiza ngoJan. Wangiqinisekisa ukuthi “wayeyazi imikhawulo yakhe” ngotshwala. Lapho ebuzwa ukuthi wayeqonde ukuthini ngalokho, waphendula wathi, "Angisoze ngadakwa kakhulu ngaze ngaphumelela". Uthe kodwa "ulayishe kuqala" ngaphambi kokuya emaphathini ngezimpelasonto futhi walala engavikelekile, walala nabesilisa abahlukene. Uvumile ukuthi ubengeke alale nalabo bafana ukube ubengadakiwe. Futhi wayengeke avume uhlobo locansi, kufaka phakathi ucansi olumnandi lwangasese, ababelufuna kaningi. Yize kunjalo uthe ngeke amlahle owesilisa ngokuthi 'amkhuthaze' ukuthi aye ocansini kulezo zimo ngoba ubephuzile futhi evuselelekile ngokocansi. Emqondweni wakhe uthe kumele ngabe ubenikeza imvume noma ngabe uyazisola ngakusasa.
Kumuntu omdala, 'ukwazi umkhawulo womuntu' ngotshwala kungahle kusho ukulahlekelwa ukulawulwa kokukwazi ukuvumelana ngokukhululekile. Ukungezwani okunjalo kokuhumusha kwenza ukuhlukumeza kwemibandela kuhambisane nezilingo zokudlwengula. Ngambuza uJan ukuthi kungani ethola ingozi yokukhulelwa noma izifo ezithathelwana ngocansi ngokungasebenzisi izakhi zokubeletha. Uphendule ukuthi ubaba wakhe uzothukuthela uma ezwa ukuthi intombazanyana yakhe ilala naye. Uthe uma ekhulelwe, uzokhipha isisu, unina angamsiza. Ngakho-ke naphezu kwezinkulumo esikoleni ngale ndaba, ngokusemandleni ukwesaba kwakhe ukuthi abazali bakhe bangasabela kanjani futhi ukucindezela kontanga ukuphuza okuningi futhi 'kumnandi' ngobusuku obubaluleke kakhulu kunokulinganisa kwakhe siqu izingozi zezempilo kuye. Lokho kungumqondo wobuntsha obuthatha ingozi.
Nakuba kuyisiphambeko sokulala ngokocansi ngaphandle kwemvume, abesifazane bavame ukukhononda ukuthi baphoqelelwe kuwo. Ucwaningo kukhombisa ukuthi 'ukuncenga' okunamandla kokuya ocansini lwangemuva kuyinto ejwayelekile kakhulu kubantu abasha abaneminyaka eyi-16-18. Izinsizwa nezintombi zikhomba izithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi njengesikhuthazi esiyinhloko. Noma bazi ukuthi “kubuhlungu kakhulu kwabesifazane”, izinsizwa zisaphusha ngangokunokwenzeka ukuze 'zincenge' abesifazane ukuba bazivumele zikwenze. Ngisho nezinsizwa bekungathi azikuthokozeli lokho. Lokhu Ingxoxo ye-10 yomsindo wamaminithi nomcwaningi oholayo uchaza kabanzi ngokutholakele kwabo. Munye kuphela umuntu wesifazane ovumile ukuthi uyayijabulela. Kwezinye izinsizwa, ama-dodo wokuthola "amaphiko ansundu" angaba umgomo oqinile.
Ukuzithiba kuyinselele kubo bobabili besifazane nabesilisa ngesikhathi esifanele, kodwa ikakhulukazi endaweni yesehlakalo phakathi kwentsha. Ngaphandle kokuthi uhlelo lokusetha imingcele selungisiwe kusengaphambili, kungaba nzima ukumelana nokuqina okunamandla lapho izincabango zocansi zihlaziya futhi uma sifuna ukubonakala sengathi zibukeka ngokocansi futhi 'zipholile'.
Kodwa-ke imfundo eyengeziwe mayelana nomthelela ophuza utshwala ngokuvuma kanye nokuthi ungabambelela kanjani lapho ubhekene nokuphoqeleka kuyadingeka. Ukufundisa 'amakhono okuphola' nendlela yokuhlonipha imingcele yomunye umuntu kuyoba yisandulela esikhulu. Ucwaningo oluthile lwezimo zengqondo zabantu abasha lucele lolu hlobo lwemfundo.
<< Kuyini Ukuvumelana Emthethweni? Ukuthumela imiyalezo ngocansi >>